Umzenzisi we-decoiler straightener feeder China Manufacturer
Inkcazo:Umatshini wokuhambisa izixhobo,Izixhasi zeServo Straightener,I-NC Straightener feeders kunye ne-Uncoiler
Home > Imveliso > Umxhasi we-Decoiler Straightener Feer > Amandla oNcedo lwensimbi ephezulu yamandla > Umzenzisi we-decoiler straightener feeder
Umzenzisi we-decoiler straightener feeder
EZIZENZEKELAYO uDEC OILER STRAIG HTENER uMondli
Isithambisi esisebenzayo sokukhusela i-decoiler straightener yesitampu sokugcina isitampu sokugcina isitena sidibanisa i feeder / i -enerator kunye ne-decoiler enikwe amandla. I-loop ye-slack iphuhliswa ngaphantsi kwe-spindle, ukunciphisa indawo yomgangatho ngokuthelekiswa ne-loops eqhelekileyo yeslayidi. Sinikezela ngeempawu ezininzi ezinokukhethwa ukuze zilungele iimfuno ezithile zesicelo, kubandakanywa ii-peelers, ukubamba iingalo, okanye ukuhlangulwa komqhubi. Le nkqubo yenzelwe iitreythi ezingama-0.6-6.0mm ubukhulu kunye nezixhobo ezinamandla ezomeleleyo ezifuna ukuqhutywa kwisimo esichanekileyo. Ngokuqulunqa loop ngezantsi kwesiporho kunye nokufaka feeder kunye ngqo, indawo ebalulekileyo emgangathweni igcinwe. Ukukhutshwa kweenqwelomoya zokondliwa kokubini kunye nokuqengqeleka ngqo, kuya kwenza uyilo olululo kwizicelo zokufa eziqhubekayo.
I-MAC4 feeder eyongezelelweyo i-feeder eqondile isebenzayo kumzi mveliso wabathengi bethu.
I-feeder ye-decoiler straightener eyondlayo ngu f okanye yenza umgca wokutya we-bracket coil sheet.
Lo matshini usebenza inomzi mveliso omnye wabathengi bethu, bavelisa indawo zohlobo lweU kunye neAdoor decoiler straightener feeder.
Umatshini wokuhambisa izixhobo Izixhasi zeServo Straightener I-NC Straightener feeders kunye ne-Uncoiler Umatshini wokuhambisa imali Umatshini wokuhambisa iPowder Umatshini wokuhambisa isitampu Umatshini wokuBumba izixhobo zeShetet Umatshini wokudambisa isitampu